Mark Viduka Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Oceania Ụmụaka Mark Viduka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a football footballius kasị mara aha na aha njirimara; 'V-bombu'. Anyị Mark Viduka Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Mark Viduka Akụkọ nwata - Ndụ mbido:
A mụrụ Mark Anthony Viduka na October 9, 1975, na Melbourne, Victoria, Australia site n'aka Joe Viduka (nna) na Rose Viduka (nne).
Ọ bụ ihe nketa nke Croatian ma nwee mgbọrọgwụ siri ike na obodo ya. N'agbanyeghị njikọ siri ike ya na ala nna ya (nke oge a Croatia), nne na nna ya hụrụ na Mark nọrọ ma tolite na Melbourne, Australia.
Joseph na Anna Rose gbapụrụ na Yugoslavia ndị Kọmunist na mbido 1960 tupu ha ezute ma lụọ n'Australia. Onye mbu gbara bọọlụ (Joe Viduka) laghachiri ịchụso ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya.
Nna Mark bụ onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ nwere mmetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike na gọọmentị Yugoslavia. Ya mere, mbugharị na iwulite ezinụlọ n'Australia bụ iji kpochapụ ha site na ndoro amoosu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O mechara laghachi Yugoslavia.
A mụrụ Mark Viduka nwa ya nwoke n'Australia naanị otu afọ mgbe ọchịchị Yugoslavia malitere usoro nkwụsị ha. Mgbe ụfọdụ, nna ya na-agagharị na-abụghị naanị ịhụ nwa ya nwoke n'Australia, kama iji kụziere ya ihe ndị dị mkpa na football.
Dika nwatakiri, Mark na-eto eto ga-echere nna ya ka o si na Croatia laghachi. Mgbe ọ laghachiri, ya na nwa ya nwoke gbara bọl.
Dịka nwatakịrị mara abụba, ọ bụ onye ihere, ọ naghị ekwu ọtụtụ okwu, mana ọ na-ege ntị. Papa ya gwara ya obere akụkụ banyere ala nna ya, Croatia.
Mark Viduka tolitere ma na-amụta football site na papa ya. Ọ hụrụ ihe mgbaru ọsọ ya nke imezu nrọ nna ya. N'oge ụfọdụ, ọ ghaghị ịlụ ọgụ n'etiti nhọrọ nke igwu egwu Australia ma ọ bụ Croatia.
Mark Viduka Biography - Croatia ma ọ bụ òtù Australian:
The Croatian Agha nke Independence si Yugoslavia lụrụ ọgụ site na 1991 ruo 1995. Mark Viduka, onye nọ n'afọ iri na ụma nọ n'elu egwuregwu ya n'oge a.
Mgbe agha ahụ biri, mba ọhụrụ ahụ enweghị ike iguzo na ụkwụ ya. Ndị mmadụ ka na-ejikọ ya na Yugoslavia.
Onye isi ala ọhụrụ ha chọrọ ime ka aha Croatia dị iche ma kwuo na ọ ga-ekwe omume site na football. Nke a bụ mmalite nke ịchụ nta siri ike maka ndị egwuregwu bọọlụ nọ n'afọ iri na ụma ma n'ụlọ ma na mba ofesi.
Ọ dabara nke ọma, akụkọ niile batara na tebụl onyeisi oche kwuru otu aha- 'Mark Viduka'.
A gwara onye isi ala ọhụrụ ahụ ka Mark Viduka si dị mma, ọ maara agbụrụ ya nke Croatian ma chọọ ka ọ bịa nyere mba ọhụrụ ahụ aka imezu nrọ ha.
“Will ga-abụ akara nke ndị Croatian niile,” ọ gwara Mak, "Are bụ otu n'ime ndị anyị nke anyị nwere olile anya na ha ga-alaghachi iji wughachi obodo anyị."
Gịnị ka onye ahụ dị afọ iri na ụma gaara ekwu? Agbanyeghị na etolitere na St Albans, na mpụga Melbourne, Croatia nọ n'ọbara Viduka. , ma Croatia bu ala nna ha.
Asụsụ mbụ nke Mark bụ Croatian n'ihi na nke ahụ bụ ihe ndị mụrụ ya na-ekwu n'ụlọ ha, Anna Rose na-esikwa naanị Croatian nri mgbe ọ nọ n'Australia.
N'ụzọ dị mwute, Mark họọrọ ụlọ nke abụọ ya, Australia. N'etiti 1993 - 1995, o mere ngosi 20 maka ndị nọ n'okpuru 20 n'akụkụ wee merie ihe mgbaru ọsọ 37.
Croatia ka nwetere ndị egwuregwu ha chọrọ iji mee ka ha bụrụ ndị ama ama. Nanị mmekọrịta ya na ala nna mbụ ya bụ ntinye ya na Croatian Soccer Association of Australia Hall of Fame
Eziokwu Mark Viduka - Ndụ Dị jụụ ma Dị Umeala Ala:
Viduka hụrụ ebe dị jụụ. Enwe udo nke uche na àgwà dị jụụ ka a na-ahụkarị dịka akụkụ dị mkpa nke ndụ ya.
Kwa ụbọchị ọ nwere ike kemgbe ọ lara ezumike nká, Mark Viduka na-akpọ Tara, bụ ọkpọ ya, maka ịgagharị n'ugwu ndị gbara ụlọ Australia ya gburugburu. E jiri nwayọ kwuo okwu ya.
Mark Viduka Ndụ Ezinụlọ:
Na mbido 1970s nne ya, Rose, onye Ukraine na-Croat kwagara, zutere nna ya Joe, onye bọọlụ na-agba bọọlụ, na Melbourne. Nna ya Joe bụ onye Croatia, ebe ọ kwagara Australia na 1960s.
Nna Mark nọ ugbu a mgbe nne ya, Rose Viduka nwụrụ na July 2014. Mark Viduka bụ nwanne nwoke nke okenye nke Diane Viduka mụrụ na Eprel 27, 1983, na Melbourne, Victoria, Australia.
Ọ bụ onye na-eme ihe nkiri, nke a maara maka forchọ Alibrandi (2000), Nwa (2010) na Ndị Agbata Obi (1985).
Ọnye na-bụ Ivana Husidic? Nwunye Mark Viduka:
N'azụ Australian Soccer Legend, enwere WAG mara mma. Ọ lụrụ Ivana Husidic (enyi nwanyị ya ogologo oge) na agbamakwụkwọ nzuzo ọ haziri na 2002 mgbe ọ ka nọ na Leeds United.
Viduka ahọrọ Dubrovnik, obodo ochie na Southern Croatia maka ebe agbamakwụkwọ ahụ. Ọ lụrụ onye bụbu onye Croatian Model.
Ha abụọ nwere ụmụ nwoke atọ: Joseph (a mụrụ na November 2002), Lucas (a mụrụ September 2006) na Oliver (a mụrụ May 2008).
Mark Viduka alitydị:
Nke a bụ ihe Mark Viduka kwuru banyere onye ya - “N’akụkụ ka ukwuu nke ọrụ m, enwere m obi ụtọ izere nnukwu mmerụ ahụ.
Ndụ m niile ihe m kachasị mkpa bụ football, football, football. Anọ m na-elekwasị anya na nke ahụ na mgbe a mụrụ ụmụ m na-elekwasị anya nwayọọ nwayọọ. Enwere m ihe ná ndụ m nke gbanwere echiche m.
Na-enweta ihe dị mkpa karịa mmeri, ida ma ọ bụ see. Enweghị m mmasị na inwe mmetụta uche. Ngosipụta nke mmetụta uche ọha, anaghị m eme ụdị ihe ahụ n'ezie.
Amaghị m ihe kpatara ya. Ọ ga-amasị m ịbụ ụdị nke anaghị echegbu onwe gị banyere nke ahụ. Abụ m Libra ka m wee dozie ihe. I duputa mba m na iko mba uwa bu ihe m na echefughi.
Mark Viduka Biography - Ọrụ na Nchịkọta:
Viduka gbawara ebe ahụ mgbe ọ dị afọ 18 wee chịkwaa, merie bọọlụ ọla edo na Johnny Warren medal na afọ abụọ kwụ ọtọ tupu ọ kwaga Dinamo Zagreb.
Ọ na-elekọta ndị otu mba Australia na 2006 FIFA World Cup na Germany.
Mark Anthony Viduka bụbu onye ọkpụkpọ egwuregwu Australia nke na-egwuri egwu dị ka etiti. Ọ bụ onye isi ndị otu mba Australia na 2006 FIFA World Cup na Germany ruo 16 ikpeazụ.
Ọ na - ejide ihe mgbaru ọsọ nke onye Australian meriri na asọmpi UEFA Champions League na anọ.
Harry Kewell na Tim Cahil Mmekorita:
Ha bụ 3 ndị egwuregwu Australia kachasị mma na Viduka na ndepụta ndepụta. Mark Viduka na Harry Kewell mee ka akụkọ ụwa dị ka ndị na-awakpo ndị mmekọ maka Leeds United ma enwechaghị ikewapụta ha.
Ụzọ dị iche iche ha dị n'elu dị iche, na Viduka na - eme aha maka onwe ya n'ụlọ tupu ya ahapụ Europe, mgbe Kewell hapụrụ mgbe ọ dị afọ iri na ụma na ịchọ ụlọ ọrụ nkwekọrịta.
N'ime FIFA 15 Australian Ultimate Team Legends:
Ha bụ ndị egwuregwu Australia kachasị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme nke bọọlụ mba ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri anyị ike ịkọwa ihe ndị kacha mma n’ime mmadụ atọ ahụ. FIFA 15 stats na-egosi mpaghara dị nso. Harry Kewell achị ebe a.
Viduka nwere abụ nke onye England na-agụ egwú / onye na-ede egwú na Middlesbrough na-akwado Alistair Griffin dere banyere ya (onye na-edekọkwa egwuregwu football nke Terry Venables dere). E dere abụ abụ a n’olu egwu “Hallelujah” nke Leonard Cohen.
Onye njikwa Middlesbrough Gareth Southgate nakweere ụda ahụ dị ka ụzọ isi bulie ego maka ọrụ ebere ọ họọrọ, Macmillan Cancer Support.
Leonard Cohen nyere ikike ka ewepụtara abụ ahụ ka ọ bụrụ otu egwu ebere. Viduka abughi otu onye nke Melbourne City FC kemgbe oge onaugural ya.
Mark Viduka bụ nwa nwanne nwanne Luka Modric:
Viduka, onye bụbu onye Leeds United ọkpụkpọ bụ nwa nwanne nne nke Madrid ugbu a Luka Modric.
Agbanyeghị, ị nwere ike ịjụ etu esi metụta ha abụọ, na-eche na Viduka bụ onye Australia mana eziokwu nke okwu a bụ na onye ọkpụkpọ a sitere na Croatian na ezinụlọ ya kwagara Australia na '60s.
Viduka na-egwuri egwu dị ka ebe etiti ma duru Australia na 2006 World Cup nke e mere na Germany. N'aka nke ọzọ, Modric abụghịtụ onye ndu ọ bụla kama ọ dị mfe otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma nke ọgbọ ya.
N'ime ha abụọ, Modric bụ n'ezie onye ọkpụkpọ ka mma, agbanyeghị, n'otu oge ahụ, Viduka bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ Australia kachasị ukwuu.
Kemgbe afọ 2009, enigmatic mbụ nke Premier League na onye isi Socceroos ezere ọkụ. Ọ naghị ekwukarị banyere A-League ma ọ bụ Socceroos.
Ọ chọghịkwa ịkpọsa ezumike nká ya na egwuregwu ahụ. Ọ na-ekwusi ike na ego niile enyefechara ya apụtaghị. Naanị ihe ọ chọrọ bụ nwunye ya na ụmụ ya.
Achingzụ ụmụ ya:
Dị ka nna ya mere maka ya, ugbu a Viduka na-azụ ụmụ ya na Knights.
"Know mara, Melbourne bụ ụlọ m," o kwuru mgbe a dọbatachara ya n'ime ụlọ ọrụ Croatian Soccer Association nke Ụlọ Ahịa Australia. Anọwo m na-anọkarị n'ụlọ m kemgbe m toro eto, mgbe ọ bụla m laghachiri, m na-eme ihe ọ bụla merenụ. ”
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 12, 2021